एनसीसी बैंकमा १८ करोड रुपैयाँको फर्जी ऋण काण्ड यस्तो
काठमाडौं, ३ बैशाख । नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंकमा १८ करोड रुपैयाँ फर्जी ऋण काण्ड भएको छ । तत्कालीन समयमा एनसीसीमा गाभिएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा कारण एनसीसी फर्जी ऋण काण्डमा मुछिएको हो । एपेक्स...
तिनाउ बिकास बैकलाई हकप्रद निष्काशन अनुुमती
काठमाडौ ३० चैत्र । तिनाउ बिकास बैकले ११ कारेड ९४ लाख ७९ हजार छ सय नौ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नको लागि अनुुमती पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैकलाई हाल कायम रहेको चुक्ता पुंजीको...
नेप्सेमा एकै दिन दुुई अर्ब सात करोडको सेयर कारोवार (तालिका–सहित)
काठमाडौं, ३० चैत । साताको चौंथौ कारोवार दिन बुुधबार नेप्से घटेपनि कारोवार रकम भने उच्चरुपमा बढेको छ । आज नेप्से छ दसमलव ७५ अंकले घटेर १७ सय तीन दसमलव सात अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि ए...
नेप्सेमा ३३ अंकको उच्च बृद्धि, एक अर्ब ९० करोडको कारोवार (तालिका–सहित)
काठमाडौं, २९ चैत । साताको तेस्रो कारोवार दिन मंगलबार नेप्से ३३ दसमलव ९८ अंकले बढेर १७ सय १० दसमलव २० अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि सात दसमलव ४१ अंकले बढेर तीन सय ७१ दसमलव आठ अंकमा कायम रहे...
धितोपत्र बोर्डद्धारा धितोपत्र खरिद सम्वन्धी निर्देशिकामा २०७३ मा दोस्रो संसोधन
काठमाडौ, २८ चैत । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र खरिद सार्वजनिक सम्वन्धी निर्देशिका २०७३ मा दोस्रो संसोधन गरेको छ। बोर्डले गत माघ एक गतदेखि ऐच्छिक रुपमा आस्वा प्रणाली लागुु गरेको भएपनि त्यसमा देखिए...
नेप्से २४ अंंकले बढ्यो, एक अर्ब ६२ करोडको सेयर बिक्री (तालिका–सहित)
काठमाडौं, २८ चैत । साताको दोस्रो कारोवार दिन आज सोमबार नेप्से २४ दसमलव ६२ अंकले बढेर १६ सय ७६ दसमलव २२ अंंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि पाँच दसमलव तीन अंकले बढेर तीन सय ६३ दसमलव ६७ अंकमा ...
एभरेष्ट बैंकद्वारा नव वर्ष २०७४ सालको क्यालेण्डर विमोचन
काठमाडौं, २५ चैत । बैंकको प्रधान कार्यालयमा भएको एक औपचारीक कार्यक्रममा बि.के श्रेष्ठ (अध्यक्ष, एभरेष्ट बैंक लि.) र डा. राम. एस. साँपुरे (कार्यकारी निर्देशक, पन्जाब नेशनल बैंक) ले सयुक्त रुपमा एभरेष्ट...
एन आई सी एशिया बैंकद्वारा पाँच स्थानमा नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं, २५ चैत्र । एन आई सी एशिया बैंकले देशका विभिन्न स्थानमा गरि पाँच स्थानमा आफ्नो नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । ती नयाँ शाखाहरुको एकै साथ एक समारोहका बिच उद्घाटन गरिएको सो बैठकद्धारा जारी विज्...